ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း | Geocon
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ| privacy| © GEOCON Group
မြောက်ဘက်ရှိ Gungahlin မှ တောင်ဘက်ရှိ Tuggeranong အထိ ကင်ဘာရာတစ်ခွင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောတံဆိပ်တပ်ထားသော ကရိန်းများနှင့်အတူ ပရိဝုဏ်ပုံစံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ၏ ခြေရာကို မြို့အနှံ့ ချဲ့ထွင်လျက်ရှိသည်။ အမျိုးသားမြို့တော်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆောက်အဦများထဲတွင် Republic ပရိဝုဏ် - ACT တွင် အကြီးဆုံးသော ပရိဝုဏ်နှင့် High Society - Canberra ရှိ အမြင့်ဆုံး လူနေအိမ်တာဝါတိုင်များ။
ယနေ့တွင်၊ Geocon အလံသည် ကင်ဘာရာရှိ Belconnen ရှိ Republic ပရိဝုဏ်၊ Canberra မြို့ရှိ Metropol၊ Greenway ရှိ Aspen Village နှင့် Gungahlin ရှိ The Establishment အပါအဝင် Canberra ရှိ ရည်မှန်းချက်ကြီးပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရှိဆုံး ရောစပ်အသုံးပြုသည့် ပရောဂျက်အချို့အပေါ်တွင် ပျံသန်းနေပါသည်။
Canberra တွင် အဆန်းသစ်ဆုံးနှင့် ရည်မှန်းချက်အရှိဆုံး ပရောဂျက်အချို့ကို တည်ဆောက်နေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် Gecosystem ကို ဖန်တီး ထားသည်။ အရည်အချင်း၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတို့သည် အလုပ်အတွက် စကားလုံးများဖြစ်သည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။
Geocon ရဲ့ Multi-စည်းကမ်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့က Single-handedly ကင်ဘာရာ skyline ကိုပုံဖော်ကြသည်။
Geocon အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့, ပါရမီတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့နှင့်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများရှာကြံနေပါတယ်။
အခွက်တဆယ်သစ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် Geocon ၏ဆက်လက်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များအားလမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။
LICENCE NO 18401809. MIN EER 5. *T&C apply. Artist impressions may be used. | စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ| privacy| © GEOCON Group